लड्दैपड्दै उभिएको बर्दियाको डल्ला गाउँ होमस्टे - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
जनक पौड्याल २२ पुस
९ महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका बेलायती राजकुमार ह्यारीको भ्रमण तालिकामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि परेको थियो। उनी २०७२ साल चैत ८ गते बर्दिया पुगे। उनले निकुञ्जको बीचमा बगेको खौरिया खोलामा र्‍याफ्टिङ गरे। निकुञ्जसँगै जोडिएको एउटा सानो थारु गाउँमा पुगे र केही समय १४ नम्बर होमस्टेमा आराम गरे। प्रिन्स ह्यारीले टेकेपछि सूर्यपटुवा गाविस ४ मा रहेको डल्ला गाउँको एकाएक चर्चा भयो। अहिले पनि डल्ला होमस्टेमा पुग्ने अधिकांश पाहुनाले 'प्रिन्स ह्यारी यहाँ आएका थिए होइन? उनी कुन घरमा आराम गरेका थिए? उनले के भने? के-के गरे?' जस्ता प्रश्न पहिले गर्छन्।
डल्ला होमस्टे सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परशुराम चौधरीले भने, 'होमस्टे पहिलेदेखि नै थियो, देशभित्रकै केही ठूलाबडाहरु पनि आएकै हुन्। तर प्रिन्स ह्यारी आएपछि भन्छन् नि सुनमा सुगन्ध भने जस्तो भयो। चर्चा एकाएक चुलियो।'
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला डल्ला गाउँ सरकारी नजरमा 'माओवादी गाउँ' थियो। महेन्द्र राजमागर्गदेखि १८ किलोमिटर दक्षिणमा जंगलसँग जोडिएको डल्ला गाउँलाई तत्कालीन सुरक्षाकर्मीले फुटी आँखाले हेर्न चाहेनन्। परशुराम चौधरीले ती दिन सम्झँदै भने, 'एक सय १२ घर भएको हाम्रो गाउँबाट सशस्त्र युद्द्धका बेला ११ जनाले ज्यान गुमाए। सूर्यपटुवा गाविसबाट मात्र लगभग २१ जना मारिए होला। एउटै घरका पाँच जनासम्म परे।'
समाजमा पर पारिएको थारु समुदायका केही मानिसले माओवादी युद्धलाई जानीनजानी आत्मसात गरेका थिए। त्यसको भार उनीहरुले चुकाउनुसम्म चुकाए। चौधरी भन्छन्, 'थारु समुदाय सँधै पछाडी पारिएको हो। युद्धसँगै आएको राजनीतिक चेतनाले हामीलाई आत्मबल भने मिलेको छ। त्यसैले डल्ला गाउँलाई नमूना होमस्टे बनाउन भनेर हामी कस्सिएका छौँ।'
डल्ला गाउँका बडघर अशोकराम चौधरीले भने, 'बर्खामा हिलैहिलो र हिउँदमा धुलैधुलो हुन्छ। राम्रो बाटो बनिदिए यहाँ पाहुनालाई आउन पनि सजिलो हुन्थ्यो।'
सामुदायिक वन संरक्षणको काम पनि सजिलो कहाँ छ र। डल्ला गाउँमा गैँडाको आक्रमणबाट दुई जना र हात्ती आक्रमणबाट दुई जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तथापि जंगलसँग उनीहरुको नातो पुरानो छ, माया पुरानो छ। २०५४ सालमा सुरु भएको शिव सामुदायिक वनका अध्यक्ष मंगल चौधरीले भने, 'त्यही जंगल छ, त्यही जनावर छन् र त पाहुनाहरु आउँछन्। कहिलेकाहीँ जंगली जनावरले हैरान बनाउँछ तर पनि तनीहरुकै संरक्षण गर्नुछ। कहाँ जाउन् र उनीहरु। यो धर्ती त उनीहरुको पनि हो नि।'
पर्या पर्यटनको विकास गर्ने र डल्लालाई देशकै नमूना होमस्टे बनाउने काममा गाउँले एकजुट भएर खटेका छन्। अहिले २२ वटा घरमा होमस्टे सञ्चालित छन्। २०६७ सालमा तत्कालीन मिसनेपाल सदीक्षा श्रेष्ठले उद्घाटन गर्दा ११ घरमा होमस्टे थियो। अध्यक्ष चौधरीले भने, 'पाहुना थपिदैँ गए होमस्टेको संख्या बढाउन हामी सक्छौँ। होमस्टे नभएका घरहरुमा पनि कसैले गाई-भैँसी पालेका छन्, कसैले अर्गानिक तरकारी खेती, कसैले लोकल कुखुरा, बाख्रा, माछा पालन गरेका छन्। पाँच घरले बेतका फर्निचर बनाउने जिम्मा लिएका छन्। समुदायलाई नै लाभ हुनेगरी हामी अघि बढेका छौँ।'
डल्लामा बर्सेनी १२ देखि १३ हजार पर्यटक पुग्छन्। त्यसमा पाँच देखि ६ सय विदेशी पाहुना हुन्छन्। परशुरामलाई लाग्छ, यो संख्या अझै बढाउन सकिन्छ। उनको चाहना छ, कम्तिमा पर्यटन बोर्डले मात्र भए पनि वर्षमा केही कार्यशाला वा तालिमा यहाँ आएर गरोस्। उनले भने, 'हामीले हाम्रो ढंगले होमस्टे सञ्चालन गरेका हौँ। देशका अरु ठाउँमा कसरी सञ्चालन भएका छन् त्यो बुझ्न पाए हुन्थ्यो। पर्यटन बोर्डले बर्दियाको होमस्टे देखाउन लम्जुङको होमस्टे सञ्चालकलाई ल्याओस, हामीलाई उता लगोस्। त्यसले सांस्कृतिक आदानप्रदानसँगै होमस्टे सञ्चालनमा थप अनुभव मिल्थ्यो।'
प्रकाशित २२ पुस २०७३, शुक्रबार | 2017-01-06 16:24:56
जनक पौड्यालबाट थप
चियापसले भए मोडल
मार्खुबाट हेर्दा यस्तो देखियो इन्द्र सरोबर (फोटोफिचर)